Madaxda dowlad goboleedyada qaarkood ayaa dadaal ugu jira sidii loo baajin lahaa kulanka… – Hagaag.com
Madaxda dowlad goboleedyada qaarkood ayaa dadaal ugu jira sidii loo baajin lahaa kulanka…
Wararka ka imaanaya Magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in Madaxda Dowlad Goboleedyada qaarkood ay dadaal ugu jiraan, sidii loo baajin lahaa kulanka berrito ee Golaha Shacabka.
Madaxda Dowlad Goboleedyada ayaa Madaxweynaha Somalia, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Gudoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ku cadaadinaaya in la joojiyo kulankaasi, si aanay Xarunta Golaha Shacabka uga dhicin mid lamid ah dhacdadii shalay amaba gacan ka hadal.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) uu dareen ka muujiyay tallaabada lagu ganaaxay shan iyo tobanka Xildhibaan iyo falcelintii ay maanta ku sheegeen in kulanka berrito ee Golaha Shacabka ka qaybgeli doonaan.
Ilo wareedyada ayaa sheegaya in Madaxda Dowlad Goboleedyada ay Madaxweynaha iyo Gudoomiyaha Golaha Shacabka ka dalbadeen baajinta kulankaasi.
Tani ayaa waxay imaaneysaa, iyadoo ciidan dharcad ahi oo ka tirsan Hay’adda Nabad Suggida & Sirdoonka Qaranka (NISA) lagu arkay aagga Xarunta Golaha Shacabka.
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka mid ah Xildhibaanada laga ganaaxay shanta kulan ee Golaha Shacabka ayaa sheegay in wixii berrito soo gaara uu masuuliyadeeda qaadi doono Gudoomiyaha Golaha Shacabka.
“Warqadda sharci-darrada ee magacyadeena lagu qoray ee Mursal askarta u dhiibay, dhiiganana lagu baneysanayay wixii nagu soo gaara masuuliyadeeda si shakhsi ah waxaa u qaadaya Gudoomiye Maxamed Mursal.”
“Mursal waxaan leenahay shuruucda dalka wax jeebkaaga geli kara waa ka weyn tahay ee dastuurka iyo xeer hoosaadka Golaha Shacabka, mudane u hoggaansan.”.
Qoraal ka soo baxay Xafiiska Guddoonka Golaha Shacabka ayaa lagu sheegay in kulanka berrito looga hadli doono safmarka Coronavirus iyo u codeynta laba xubnood oo buuxin doono boosas ka bannaan Guddiga Madaxabannaan ee Xuduudaha Dalka.